Taa, e nwere bụ ndị kasị ibu n'ụwa revival
Kwa ụbọchị, banyere 780 000 ndị ka okwukwe na Jizọs!
Na mgbe n'ihu n'akụkọ ihe mere eme ọtụtụ zọpụta gburugburu ụwa n'oge anyị a. Anyị bi n'oge na mgbe ndị kasị ibu n'ụwa akuku butere na!
Ọtụtụ na-arụsi ọrụ ike na-eche na oké n'efu nke oge anyị. Ntụle revival onwe ha, na-kpamkpam ekwe. Ma, ezigbo enyi: a aghọwo a generalfel. E nwere otu nnukwu revival na ụwa anyị ugbu a! Mgbe n'ihu n'akụkọ ihe mere eme nwere ọtụtụ zọpụta dị ka ọ bụ ugbu a. Odika ruo 780 000 ndị na-anabata Jizọs na-azọpụta ọ bụla ụbọchị gburugburu ụwa!
Chọpụta, ọ bụ na-n'okpuru a n'efu nke oge anyị, na anyị maara banyere, ma unu anya kpuru ìsì n'efu, ma na-aṅụrị ọṅụ na ọtụtụ ndị na-abata na alaeze nke Chineke kwa ụbọchị. Mgbe ụfọdụ, m na-eche nke NdŽozi n'oge Jizọs na-ekwo ekworo nke anyị taa, bụ ndị ga-abụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme oge na anyị ugbu a ndụ na. The oge mgbe ndị kasị ibu n'ụwa akuku butere na!
Ụwa revival underway taa
Na mgbe n'ihu n'akụkọ ihe mere eme ọtụtụ zọpụta gburugburu ụwa dị ka ọ na-eme n'oge anyị. Kwa ụbọchị, banyere 780 000 ndị ka okwukwe na Jizọs!
Anyị na-atụ anya na taa, e nwere ihe 2.5 ijeri Kraịst na ụwa.
70% nke ndị a na-adịghị okwukwe n'oge 1900s, na-eme 1,75 ijeri.
N'ime ndị a, 1,75 ijeri, 70% nke ha na-n'okwukwe mgbe 1945, nke pụtara na ihe 1.2 ijeri.
N'ime ndị a, 1.2 ijeri ndị kweere mgbe 1945, 70% kwere na ato gara aga.
Nke a pụtara na banyere 857 nde kweere ikpeazụ afọ atọ.
Nke a pụtara na banyere 285 nde kweere na onye ọ bụla nke gara aga afọ atọ na revival na-aga n'ihu.
N'agbanyeghị ihe ị na-eme nchọpụta, ị ga-ahụ na osisi ike na-abawanye n'ụzọ dị ịrịba ama n'oge anyị.
Isi Iyi: Facebook - Nils Gunnar Lönnegren
780 000 ụbọchị ọ bụla
Ọ bụrụ na m na-anọgide na na ya ngụkọta oge nke narị afọ, 285 nde ga-azọpụta kwa afọ ka ga-abụ ihe:
23,7 nde zọpụta kwa ọnwa
5.5 nde zọpụta kwa izu
780 000 zọpụta ụbọchị ọ bụla
Anyị na-enwe ndị kasị ibu n'ụwa revival! Na mgbe n'ihu n'akụkọ ihe mere eme ọtụtụ zọpụta gburugburu ụwa dị ka ọ na-eme n'oge anyị.